नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? - नेपालबहस
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
| ९:२९:२२ मा प्रकाशित
४ जेठ, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म नागरिक लगानी कोषले ५९ करोड २० लाख ९ हजार मुनाफा गरेको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कम्पनीको मुनाफा यस वर्ष ५६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत वर्षको यस अवधिसम्म कम्पनीले ३७ करोड ९४ लाख यो नाफा गरेको थियो ।
यस वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानी ४० दशमलव ५६ प्रतिशत बढेकाले पनि मुनाफामा वृद्धि हुन सहयोग मिलेको देखिन्छ । गत वर्ष ७० करोड ८५ लाख कुल आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष ९९ करोड ५९ लाख २१ हजार यो आम्दानी गरेको हो । यस वर्ष कम्पनीको खर्च पनि करीब २ प्रतिशत मात्र बढी भएको छ ।
गत वर्ष २० करोड २६ लाख कुल खर्च गरेको कम्पनीले यस वर्ष २० करोड ६५ लाख ७५ हजार गरेको छ । हकप्रद शेयर र बोनस शेयरमार्फत १२३ प्रतिशत चुक्तापूँजी बढाएर ३ अर्ब पुर्‍याएको कम्पनीको शेयर प्रिमियम रकम १ अर्ब २६ करोड ४८ लाख ७८ हजार छ ।
कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ८३ प्रतिशत बढी १३ अर्ब २६ करोड ४० लाख ३४ हजार कायम भएको छ । कम्पनीले यस वर्ष गत वर्षभन्दा १४ प्रतिशत बढी लगानी गरेको छ ।
गत वर्ष १ खर्ब ४२ अर्ब २५ करोड ८ लाख लगानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष १ खर्ब ६२ अर्ब ४२ करोड ९ लाख ८७ हजार लगानी गरेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक २६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ १५६ रहेको छ ।
नागरिक लगानी कोषको लिलामी शेयरमा आवेदन गर्ने अन्तिम दिन आज १ हप्ता पहिले
लाभांश पारित गर्न नागरिक लगानी कोषले आव्हान गर्यो साधारणसभा २ हप्ता पहिले
नागरिक लगानी कोषको साढे ३ लाख कित्ता संस्थापक शेयर आजदेखि लिलामीमा १ महिना पहिले
नागरिक लगानी कोषको नाफामा वृद्धि ३ महिना पहिले
नागरिक लगानी कोषको साढे ३ लाख कित्ता शेयरमा बुधवारदेखि आवेदन दिन सकिने ४ महिना पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने २० मिनेट पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए २० मिनेट पहिले
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु २९ मिनेट पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने ३३ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी ३४ मिनेट पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै ३६ मिनेट पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी ३९ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा ४३ मिनेट पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध ४५ मिनेट पहिले
मेलम्ची–हेलम्बु जोड्ने मोटर बाटो निर्माण जारी ५३ मिनेट पहिले
एक हप्तादेखि अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग अझै खुल्न सकेन ७ घण्टा पहिले
महुली लघुवित्तको लिलामी शेयरमा आवेदन गर्ने आज अन्तिम दिन ६ दिन पहिले
देशका १३ जिल्लामा बाढी र पहिरो: ५ जनाको मृत्यु, १९ जना बेपत्ता ४ दिन पहिले
आज थप २,४०१ जनामा कोरोना पुष्टि, ३४ संक्रमितको मृत्यु १ दिन पहिले
हुम्लामा शिक्षकले कुटे स्वास्थ्य संयोजक २ हप्ता पहिले
अवकाशपछि गाउँमै व्यावसायिक उत्पादनमा सक्रिय सुवेदार ३ हप्ता पहिले
गुल्मीमा एक पुरुष मृत फेला १ हप्ता पहिले
न्यायाधीशहरु विभाजित भएपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलाश ताेकिने ३ हप्ता पहिले
सोलुखुम्बुमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल ६ महिना पहिले
इराकमा सरकार विरोध प्रदर्शन जारी, ९३ जनाको मृत्यु २ वर्ष पहिले
मृगको मासु र भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ १ वर्ष पहिले